नमोबुद्धमा वृहत सरसफाई र वृक्षारोपण - सबैको समाचार
काभ्रे : विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर नमोबुद्ध नगरपालिकाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र भकुण्डेबेशीमा वृहत सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।
विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) को अवसरमा नमोबुद्ध नगरपालिकाले आइतबारदेखि नै सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिरहेको छ । सोही क्रममा आज सोमबार भकुण्डेबेशीमा नमोबुद्ध नगरपालिकाको आयोजनामा वृहत सरसफाई कार्यक्रम गरिएको हो ।
भकुण्डेबेशी चोकदेखि नौबिसेसम्म विपी राजमार्गको आसपास सरसफाई गरिएको थियो । सो क्रममा राजमार्गको दायावाया फुटपाथ व्यवस्थापनको कामसमेत गरिएको छ ।
नगर प्रमुख कुनसाङ लामाको नेतृत्वमा भएको सरसफाई कार्यक्रममा नगरपालिकाका कर्मचारी, स्थानीयबासी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विद्यालयका शिक्षक÷विद्यार्थी, व्यवसायी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट सुरक्षाकर्मी लगायत सयौंको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले स्वच्छ वातावरणका लागि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी भएको भन्दै नगरपालिकाले सुरु गरेको सरसफाई अभियानमा साथ दिने सबैलाई धन्यवाद दिए ।
अब बजार व्यवस्थापनको कार्यविधि तयार पारेर बजारलाई व्यवस्थित बनाउने, सफा र वातावरणमैत्री बनाउने अभियान नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने पनि लामाले बताए । उनले जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कार्बाहीको व्यवस्था गर्ने, राजमार्ग क्षेत्रमा फोहोर फाल्न निषेध गर्ने लगायतका योजना ल्याउने पनि बताए ।
यस्तै आज सोमबार नै नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ८ का वृक्षारोपण समेत गरिएको छ ।
वडा नं. ८ को डराउनेपोखरी र देवीस्थानमा धुपी, कपुर लगायतका बिरुवा रोपिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नंं ६ का वडाअध्यक्ष टिकाबहादुर केसीले जानकारी दिए । बृक्षारोपण कार्यक्रममा नगर प्रमुख कुनसाङ लामा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पौडेल, वडा नं. ८ का वडाअध्यक्ष शेरवहादुर तामाङ लगायतका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
पनौतीमा सकियो १२ वर्षे मेला, सकिएन पूर्वाधार निर्माण